Kana iwe ukaona iko kukanganisa "Ichi chishandiso hachichagovaniswa newe" chakagadziriswa | IPhone nhau
Kana iwe ukaona kukanganisa "Ichi chishandiso hachichagovaniswa newe" unogona kuchigadzirisa nyore
Toni Cortés | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Hapana munhu akakwana, ndoda Apple. Masisitimu anoshanda ekambani anowanzo gadzikana uye akachengeteka, ndeimwe yemapepa echiratidzo, asi panguva imwe chete akaomarara, uye nguva nenguva "bug" inoonekwa izvo zvavanokurumidza kugadzirisa kubva Cupertino.
Nezuro imwe yemakodhi emakodhi akaonekwa pane vamwe vashandisi maPhones. Kana ivo vakaedza kumhanyisa imwe application, meseji yaizoonekwa ichiti chirongwa ichi hachigovaniswe nemhuri. Parizvino nepo Apple ichigadzirisa, pane "kugadzirisa kumba."
Nezuro, masocial network akaratidzira chikanganiso chakatanga kuoneka pane mamwe maIOS. Vanoverengeka vashandisi ve iPhone ne iPad vakanyunyuta nezve kukanganisa system paunenge uchiedza kumhanyisa zvimwe zvinoshandiswa pamidziyo yavo.
Meseji «Ichi chishandiso hachichagovanwa newe»Uye ivo vanokumbirwa« kutenga »kunyorera kubva kuApp Store zvakare. Dambudziko rinoratidzika kunge rinokanganisa nhamba hombe yevashandisi ve iPhone zvisinei kuti vari kushandisa Mhuri Kugovana here kana kwete.
Bvisa iyo app uye kuisazve iyo kubva kuApp Store inoita sekugadzirisa dambudziko, asi izvi zvinotungamira kurasikirwa kwedatakunyanya kana munhu asina iCloud backup yakagoneswa. Dambudziko rinongoita kunge rinokanganisa mapurogiramu senge WhatsApp neYouTube, kunyangwe chikonzero nei izvi zvichiitika zvichiri kujeka.
Tevedza nhanho idzi kudzoreredza app usingarasikirwe neyakaenderana data.
Zvingangodaro, kubva kuCupertino atove ndaisa kugadzirisa dambudzikoAsi parizvino, unogona kuyedza mhinduro iyi kuti uwane WhatsApp, YouTube, uye chero chimwe chirongwa chinogadzira chikanganiso "chisingachagovaniswa newe" kuti ushande pa iPhone yako.
Vhura Zvirongwa, enda kuGeneral> iPhone Storage. Mune runyorwa rwezvishandiso zvinoratidzwa, tsvaga iyo application inoratidza iko kukanganisa uye tinya pa «Uninstall app«. Usanetseke, hapana data richabviswa kubva kunyorera.
Dzokera kuchiratidziro chemumba uye tora icon yeapp yauchangobva kusunungura. Chishandiso chako chinokuzivisa iwe kuti chiri kurodha pasi zvakare, uye chobva chachiisazve.
Kana chikumbiro changodzoreredzwa, iko kukanganisa hakuchazoonekwazve uye unogona kuishandisa ne data rako rese sezvawaimboita kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Kana iwe ukaona kukanganisa "Ichi chishandiso hachichagovaniswa newe" unogona kuchigadzirisa nyore
Alejandra Augu akadaro
Zvakanaka! Nguva dzose zvinobudirira! Ndatenda
Pindura kuna Alejandra Augu
Maitiro ekusarudza ndiani anogona kupindura kune edu matsamba pa Twitter
Hackers uye vezvenhau vane chakabiwa vhezheni yeIOS 14 kwemwedzi